प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप : विकास विरोधीले ज्योतिषीलाई उक्साएर भ्रम फैलाए !
बुटवल – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेको कामको गति देखेर विरोधीले भ्रम फिजाइरहेको बताएका छन् ।
समृद्धिको यात्रा देख्न नचाहनेले ज्योतिषीलाई समेत उक्साएको दावी गरे ।
शनिवार बुटवलको जितगढी विजय उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘विकास र समृद्धिको विरोध गर्ने ठाउँ नपाएर विरोधीहरूले ज्योतिषीहरूलाई उचालेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘ज्योतिषीहरू पनि दक्षिणाको लोभमा नपरे हुन्छ । जनताको जानुपर्ने ठाउँमा ज्योतिषीकोमा गएर केही हुँदैन ।’
उनले थपे, ‘ज्योतिषीकोमा गएर यस सरकार यस्तो हुँदैछ भनिदिनुपर्‍यो भन्न थाले । तर कुनै भ्रममा नपरे हुन्छ । देश विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ ।’ प्रधानमन्त्री कोपी शर्मा ओलीले संविधान विरोधी क्रियाकलाप गर्न कसैलाई छुट नहुने बताएका छन् ।
ओलीले संविधान विरोधी काम गर्ने जो कोहीलाई पनि सरकारले नछोड्ने बताए । संविधानविपरीत काम नगर्नको लागि समेत उनले आग्रह गरेका छन् । नेपालले आफ्नो देशको पहिचान आफैं बनाउन सक्ने हैसियत भएको बताएका छन् । उनले वीर पुर्खाहरूले रगत पसिना बगाएको इतिहास बोकेको देश नेपाल भएको भन्दै आफ्नो पहिचान आफैं स्थापित गर्ने महान अभियानमा सरकार लागिपरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै पेशाकर्मीका समस्यातर्फ सरकारको ध्यान रहेको बताउँदै सबैका समस्या सँगसँगै समाधानको बाटोमा सरकार अगाडि बढेको समेत बताए ।
उनले सरकारको ध्यान शान्ति, सुव्यवस्था र बिकासमा केन्द्रित रहेको भन्दै ओलीले अब मुलुकले बिकासको बाटो समात्ने दाबी गरे । त्यसका लागि सबै आधारहरू तयार हुँदै गएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही समूह देश टुक्र्याउन उद्धत रहेको भन्दै जनतालाई सचेत हुन आग्रह समेत गरे । ‘दुनियाँ एकातिर छ, केही मान्छे अहिले उपद्रो गर्दैछन्,’ उनले भने, ‘पुग्ने कहाँ हो ? गर्ने के हो ? आजको समस्या के हो ? थाहा छैन । तर केही न केही उपद्रो गर्न खोज्दैछन्, त्यस्तासँग सचेत हुन आवश्यक छ ।’
उनले देशभरका गढी र किल्लाको सरकारले संरक्षणमा गर्ने बताए । जितगढी किल्लाको रक्षा गर्नु देशको रक्षा गर्नु भएको भन्दै उनले यहाँको अतिक्रमित जमिनलाई पुरानै अबस्थामा कसरी ल्याउने सरकारले भन्नेबारे सरकारले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले वीर पुर्खाहरूले विरतापूर्ण काम गरेका क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने पहल थालेको बताए । उनले जितगढी किल्ला नेपालको गौवरपूर्ण क्षेत्र रहेको बताए ।
कार्यक्रममा ५ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जितगढी र मणिमुकुन्द सेन उद्योग जोडन आवश्यक रहेको बताए । नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले जितगढीको गुरुयोजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
धरानमा बैंकका कर्मचारीमाथि गोली प्रहार
मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्छ : वरिष्ठ नेता नेपाल